Oromoo! Gadaan Kan Tokkummaaf Bilisummaati!! - Kichuu
HomeAfaan OromooRadioOromoo! Gadaan Kan Tokkummaaf Bilisummaati!!
Salaale, Dagam, Hambisoo Waajjira ABO
Jawwar keenya waggaa 1 dura cimseetu Abiy Ahmed’n balaaleffate.Maaliif ‘Indehone’ naaf ‘Hingallaxamne’
Artistii beekamaan Nuhoo Goobanaa eebba waajjira ABO Adaamaarratti argame. Qabsaa’aa dhugaan akkana.